आमाले फ्यालेर हिँडिन् :बेवारीसे शिशुलाई महिला प्रहरीले गराईन स्तनपान, दुनियाँका आँखा रसायो ! – Krazy NepaL
January 27, 2021 998
अर्जेन्टिनाकी एक महिला प्रहरीले अस्पतालमा बेवास्ता गरी छाडिएको शिशुलार्इ स्तनपान गराइरहेको तस्विर सार्वजनिक भए पछि उनको बढुवा गरिएको छ । स्तनपान गराइरहँदा सिलिसटे अयाला प्रहरी पोशाकमा ड्युटीमा खटिरहेकी थिइन्।
अर्जेन्टिनाको प्रहरीले बुइनोस एरिस क्षेत्रमा ला पाल्टाबाट छ जना शिशुहरुको उद्धार गरेका थिए। उक्त प्रहरी समूहमा रहेकी सिलिसटे अयाला पनि रहेकी थिइन्।उद्दार गरिएका मध्य सबै भन्दा सानो सात महिनाको एक बालक धेरै रोए पछि अस्पतालको अनुमति लिएर उनले सो बच्चालार्इ स्तनपान गराएकी थिइन्।
सिलिसटेको १६ महिने छोरी रहेको छ। सिलिसटेले एक स्थानिय संचारमाध्यमलार्इ भनिन् ‘मैले कुनै संकोच बिना सो बच्चालार्इ स्तनपान गराए र उ शान्त भयो।’ सिलिसटेको तस्विर उनकै सहकर्मी मार्कोस हेरेडियाले फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए।
तस्विर पोस्ट भएलगत्तै भाइरल हुन पुग्यो र सिलिसटेले देखाएको ममता समाचारका हेडलाइन बन्न पुगेको थियो। बुइनोस एरिस प्रान्तका सुरक्षा मन्त्री क्रिस्टियान रिटोन्डोले सिलिसटेलार्इ भेटेर उनी सर्जेन्ट पदमा बढुवा भएको जानकारी दिएका थिए। रिटोन्डोलेले सिलिसटेले देखाएको ममताको कदर गरेको र त्यस्तै अर्जेन्टिनालार्इ यस्तै प्रहरी प्रशासन चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
Prevमनकामना मन्दिरको दर्शन गरि आज १४ माघ २०७७ बुधवारको राशिफल पढ्नुहोस्
Nextयी अक्षरबाट नाम शुरु हुने व्यक्ति हुन्छन् निकै भाग्यमानी, तपाईको नाम कुनबाट ?
नख्खु जेलबाट सुरुङ खनि भागेको तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर लामाको निधन
यी मध्ये कुनै एक संकेत तपाईमा पनि देखिए ? सावधान ! हुनसक्छ सुगरको समस्या
“यदि तपाईंलाई य’स्तो खालको सम’स्या छ भने भुलेर पनि केरा नखा’नुस नत्र ज्यान जान सक्छ “
तपाईको हत्केलामा यस्तो चिन्ह छ ? यस्ता व्यक्ति हुन्छन् निकै भाग्यमानी